Waa Tan Sababtii Dhabata Ahayd Ee Ka Danbaysay Lacagtii Ay Kooxaha Ingiriisku Ugu Deeqeen Madaxii Maamulka Premier league Ee Richard Scudamore Iyo Qaabka Loo Siin Doono Oo La Ogaaday.. - GOOL24.NET
Waa Tan Sababtii Dhabata Ahayd Ee Ka Danbaysay Lacagtii Ay Kooxaha Ingiriisku Ugu Deeqeen Madaxii Maamulka Premier league Ee Richard Scudamore Iyo Qaabka Loo Siin Doono Oo La Ogaaday..
Kooxda Chelsea ayaa soo hindistay qorshe guulaystay oo lagu abaal marinayo madixii maamulka Premier league ee Richard Scudamore waxaana shirkii kooxaha Premier league ee dhawaa lagu ansixiyay in koox kasta oo Premier league ahi ay 5 milyan oo gini ku abaal mariso Richard Scudamore laakiin waxaa soo baxday faah faahin dheeraad ah iyo sababtii laga lahaa.
Ugu horayn waxaa qorshahan keenay gudoomiyaha kooxda Chelsea ee Bruce Buck kaas oo ay tan iyo carruurnimadii saaxiibo ahaayeen Richard Scudamore laakiin marka laga yimaado in saaxiibkii uu u diyaariyay lacag badan oo abaal marin ah oo ay kooxaha kalena ku raaceen, waxaa soo baxday sabab ka wayn intan.
Sababta dhaabta ahayd ee kooxaha Premier league u ansixiyeen lacagta abaal marinta ah ee Richard Scudamore la siinayo ayaa lagu sheegay in ay tahay qaab la doonayo in madixii maamulka Premier league aanu ku biirin horyaalada Premier League la tartamaya ee sida La Liga oo kale.
Richard Scudamore ayaa door layaableh ka soo ciyaaray in horyaalka Premier league uu noqday kan ugu lacagta badan kubbada cagta aaduunka isaga oo muddo 19 sano ah ka soo shaqaynayay wuxuuna Richard Scudamore sabab u noqday in heshiiska xuquuqda baahinta Premier league uu gaadhay £5.17 bilyan gini oo ah heshiiskii 2016 kii halka sanadkii 1999 kii uu ahaa £670 milyan gini oo kaliya markii uu Scudamore shaqadan bilaabay.
Waxaana muuqqata sida layaabka leh ee uu Richard Scudamore sare ugu qaaday lacagtii xuquuda baahinta TV-ga Premier league waxaana taas badalkeeda la doonayaa in aanu ku biirin horyaalada kale si aanu iyagana heer kale ugu soo qaadin maadaama oo uu tartan xoogani ka dheexyo.
Sidoo kale wargayska Daily Telegraph ayaa shaaciyay qaabka lacagtii min 5 milyan ginida ahayd ee kooxaha Premier leauge loo siin doono madixii hore ee maamulka Premier league ee Richard Scudamore.
Dilay Telegraph ayaa shaaciyay in koox kastaaba ayna Richard Scudamore siin doonin lacagta shanta milyan ee gini ah balse in lacagta guud ee xuquuqda baahinta Premier league inta aan la qaybin laga saari doono qiimaha loo qorsheeyay Richard Scudamore iyada oo loo kala jabin doono saddex xili ciyaareed.
In saddex xili ciyaareed ay kooxaha Premier league kala bixin doonaan lacagta min shanta milyan gini ah ee ay ugu deeqeen ayaa aad uga dhigaysa mid ayna culays ku dareemi doonin isla markaana Richard Scudamore lacagtan si sahlan ugu soo xarayn karta.